မြုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်လက်အိတ်စက်ရုံ - တရုတ်မြုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်း
တစ်ခါသုံးဗီနိုင်းလက်အိတ်အသွင်အပြင် - ၁။ အရောင် - ကြည်လင်ပြီးသဘာဝသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ အဖြူ၊ အဝါ၊ အပြာ။ 2. စက်မှုအီလက်ထရောနစ်စက်ရုံ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့်အစားအစာနယ်ပယ်များတွင်သင့်တော်ပါသည်။ 3. အရွယ်အစား: S, M, L ကို, X ကို။ 4.Rawter: ဗီနိုင်း, polyster ဗီနိုင်းကလိုရင်း။ 5.Grade: AQL1.5, 2.5,4.0 ။ ၆။ သဘာဝရာဘာစေးပရိုတိန်းသို့မဟုတ်အရှိန်လျှော့စက်မရှိပါ။ 7.Ambidextrous ဖြစ်စေလက်နှင့်ကိုက်ညီ။ ၈ ။ ၉။ အရသာမရှိ၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ အဆိပ်ကင်း၊ အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်၊ အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 10. ဆေးပညာ, အစားအစာ, စက်မှုအဆင့်စသည်တို့ ...